Zimbabwe Association in UK - DiasporaEngager
About Zimbabwe Association in UK
Zimbabwe Association in UK Zimbabwe Association in UK Zimbabwe Association: Lighting the way for Zimbabweans in the UK. The Zimbabwe Association is an independent, charitable membership organization working with Zimbabweans in the UK. It has a growing network of groups around the UK providing practical and emotional support to Zimbabwean asylum seekers and refugees. The Zimbabwe Association works with others to improve the asylum system and enhance refugee integration in the UK. The Zimbabwe Association wants to see all those seeking protection in the UK treated fairly and humanely. The Zimbabwe Association is a non-partisan and independent organisation with no political role in Zimbabwe itself. The Zimbabwe Association maintains links with groups in Zimbabwe working to improve the situation in the country. We look forward to a time when it will be safe for Zimbabwean exiles to return and rebuild the country.